သမီးဆက်ဆက်လာခဲ့မယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Facebook » သမီးဆက်ဆက်လာခဲ့မယ်
Posted by အမုန်း လုလင် on May 17, 2012 in Facebook | 12 comments
နားထဲမှာလည်း အသံတွေ ဝူးတူးဝါးတားနဲ့
By: Myat Noe Thu
face book မှ တဆင့်ရှယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည် ..။
ကိုအမုန်းလုလင်ရေ …….. အားပေးဖတ်ရှုသွားပါတယ် …….. တကယ်ကိုသနားစရာကောင်းတဲ့ ကလေးငယ်လေးရဲ့ဘ၀ပါ ………. ဒီလိုကလေးမျုိးတွေ ကမ္ဘာမှာ ဘယ်လောက်တောင်ရှိနေမလဲနော် ……
ဝေဒနာသည် ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ နေရာက ခံစားရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ဒီကဗျာလေးကို … အရင်က ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ဖတ်ခဲ့ဖူးတိုင်းလည်း … ရင်ထဲ စူးစူးနစ်နစ်ခံစားရတယ် … ကဗျာဆရာရဲ့ အရေးသား ညက်ညောမှုနဲ့ ထိထိမိမိစာလုံးတွေ သုံးသွားမှုကြောင့် …. ဇာတ်ကောင်နေရာရောက်နေသလိုတောင် ခံစားမိတယ် ။
ကဗျာရဲ့ အသွားလာအရ … ဒီဝေဒနာရှင်ကလေးက မိဘတွေဆီက ကူးတာပါ… ။ မိခင်ကနေ ကလေးကို ကူးစက်နိုင်ခြေမြင့်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ….. risk ယူ မွေးဖွားပြီးချိန် ၊ သွေးပြန်စစ်တဲ့အခါ .. ရောဂါပါမလာတဲ့ကလေးလည်း ရှိတယ် … ။ ဒီကလေးလို အပြစ်မဲ့စွာ စတေးခံရသူ ဘယ်နှစ်ယောက်တောင် ရှိခဲ့ပြီလဲ …. ။ ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက်ပိုမိုထိရောက်ပါတယ် ။ ဒီရောဂါကြီးကို …ကျန်းမာရေး အသိစိတ်ဓါတ်နဲ့ ကာကွယ်ကြပါစို့နော် ။ လူတိုင်းမှာလည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ် … သွေးကတဆင့်ကူးစက်တာမျိုးမို့ .. လိင်ဆက်ဆံတာတင်မဟုတ်ပါပဲ .. ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာတွေ ၊ သွေးသွင်းတာတွေကလည်း .. ကူးစက်တတ်ပါတယ် … ။ HIV အဖြစ်ကူးစက်ပြီးမှ … AIDS ရောဂါအဖြစ် ပြောင်းလဲပါတယ် … ။ အဲ့ဒီအခါမှသာ ပိန်ချုံးလာမယ် ၊ အနာတွေထွက်လာမယ်၊ ပါးစပ်တွေမှာ အနာတွေဖြစ်လာမယ် ..ဒီတော့မှ လူတွေ သတိထားမိပြီး .. ရောဂါသည်အဖြစ်သိလာမယ် .. ။ HIV အဆင့်မှာပဲ ရှိတဲ့ လူဆိုလျှင် ….. မျှမျှ တတ စားသောက် နေထိုင်တတ်ရုံနဲ့ … AIDS ရောဂါဘက်ကိုကူးမယ့်အခြေနေကို ထိန်းထားလို့ ရတယ် … ။ ရောဂါပိုးဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို ဟန့်တားတဲ့ ဆေးကိုလည်း မှန်မှန်တော့သောက်ရမယ် … ။ အများစုက .. ဒီရောဂါဖြစ်လျှင် ရောဂါဖိစီးတာထက် သေမယ်ဆိုတာ သိနေတဲ့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကိုပိုခံကြရပြီး .. ရောဂါထုထောင်းခံရလွယ်တယ် … ။ အိုစာ ၊ နာတာလွယ်တယ် … ။
မိမိတို့ရဲ့ မိုက်ပြစ်ကြောင့် မိမိတို့ရဲ့ နောက်မျိုးဆက် လူပုံအလယ်မှာ အရှက်တကွဲ ၊ ပင်ပန်းကြီးစွာ ကျန်ခဲ့မယ့်အဖြစ်မျိုး ကာကွယ်စေဖို့ … HIV ပိုးကူးနိုင်တဲ့အပြုမူတွေကို ရှောင်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ချင်ပါတယ် ။
အမုန်း လုလင် says:
ဒီနေ့ မှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပြန်တွေ့ 
ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ …. HIV ရောဂါကြောင့်
မိဘ ထံက ကူးစက်ခဲ့ တဲ့ ဒီလိုကလေးမျိုးတွေ
ဘယ်လောက်တောင်ရှိနေပြီလဲ မသိပါဘူး ..???
မျက်ရည် ဗူးသီးလုံးလောက်ထွက်ကျလာအောင်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်ဗျာ
အဲလောက်ရှည်တဲ့ ကဗျာမျိုး စာမျိုးကို ပီးအာင်ဘယ်တော့မှမဖတ်ဖြစ်ဘူး..
အကျဉ်းချုံး ဖတ်လိုက်တာချည်ပဲ …
ဒီကဗျာလေးကတော့ အဆုံးထိ ဖတ်ချင်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်..
စိတ်ထဲမှာ တနင့်နင့် နဲ့ အားပေးသွားပါတယ်။
ဒါမျိုး အဖြစ်တွေက ကမ္ဘာအနှံ့ပါဘဲ။
တစ်ချို့ လူတွေ မှာ ကိုယ်ဘာမှ မကျူးလွန် ရပါဘဲ နဲ့ သင့်လိုက်တဲ့ ကျိန်စာ လိုပါဘဲ။ :-(
စိုင်းထီးဆိုင် ရဲ့ “အဖေရောက်တဲ့ အခါပြန်နိုးပါနော်” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး ကိုတောင် သတိရမိသေးတယ်။
ရင်ထဲကိုတနင့်နင့်နဲ့ပါပဲ။ နှစ်ခါပြန်မဖတ်နိုင်လောက်အောင်ဆို့နင့်ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ကူးယူထားလိုက်ပါတယ်။
သနားစရာ အပြစ်မဲ့ ကလေးတွေရယ်——
ခံစားရပါတယ်။ ဒီထက် ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာကော တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ သတိပြုမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့လည်း ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ ပပြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ကြဖို့ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်း ခံစားမိပါတယ်။